သူများသည်ပင်မ Idea Distractor အဖြေများရှောင်ကြဉ်ပါ
သငျသညျသငျ့အားလိုအပ်သည်တစ်ဦးမျိုးစုံရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ယူပြီးကြသောအခါ အဓိကစိတ်ကူးအဘို့ကိုဖတ် , အများကဲ့သို့ SAT , ACT သို့မဟုတ် English လူတန်းစားအတွက်ပဲသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှအားစာမေးပွဲဖြေဆို, သတငျးကောငျးကငျသညျအဓိကစိတ်ကူးမေးခွန်းတစ်ခုကိုထုတ်တွက်ဆဖို့အချိန်အခါဖြစ်ပါသည် ရွေးဖို့ရာကနေအဖြေရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်! သငျသညျအထဲကတွက်ဆပြီးတော့အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်အဓိကစိတ်ကူး compose ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါသတင်းဆိုးကိုသင်ရွေးချယ်မှုဖြေဆိုကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ? အဖြေရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကောင်းမကောင်းရှိပါသလဲ သတင်းဆိုးများဆောင်လုလင်ဖြစ်ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့, အဖြေရွေးချယ်မှုသည်သင်၏မျိုးစုံရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ဆိုးကျိုးနှင့်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ အဖြေရွေးချယ်မှုဘုံအောင်ဆီသို့သင်ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ် အဓိကစိတ်ကူး အမှားတွေ, ဒါပေမယ့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုနည်းနည်းနှင့်အတူ, သင်မည်ကဲ့သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။ မဟာဗျူဟာအဘို့အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
ပင်မ Idea အမှား # 1: Scope အတွက်ကျဉ်းရဲ့တစ်ဦးဖြေရွေးချယ်ခြင်း
Getty Images | ဒန်းနစ်ဝေါ်လ်တန်
သင်ဟာ Leonardo da Vinci ရဲ့ပါရမီအကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်လို့ပြောကြပါစို့။ အများအပြားကအပိုဒ်သည်သူ၏ Sculpt, မီးသွေးရေးဆွဲများနှင့်ပန်းချီကားများအကြောင်းပြောဆို။ နောက်ထပ်အပိုဒ်သိပ္ပံ၌သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုဖော်ပြထားတယ်။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာသို့မိမိအထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ကြီးမားကျယ်ပြဖော်ပြချက်ပေးသည်။
သင်သာ Sculpt, မီးသွေးရေးဆွဲများနှင့်ပန်းချီကားများနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဖော်ပြသောအဖြေကိုရွေးချယ်ပါလျှင်, သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများလွန်းကျဉ်းမြောင်းသည်: ကသာကျမ်းပိုဒ်ကနေအချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အသုံးပြုသည်။
သည် "ကျဉ်း" အမှားရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို: အနည်းငယ်, ကျမ်းပိုဒ်သည်အဓိကအယူအဆလွှမ်းခြုံတဲ့အဖြေကိုရွေးချယ်ဖို့မသခြောပါစေ။
ပင်မ Idea အမှား # 2: အရမ်း Broad ရဲ့တစ်ဦးဖြေရွေးချယ်ခြင်း
Getty Images | Pankaj Upadhyay / EyeEm
သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကျမ်းပိုဒ် Reno အတွက်အပြာရောင်ကောင်းကင်တမန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေတပ်လေယာဉ်အသင်းများ '' စွမ်းဆောင်ရည်နောက်ဆုံးမေလ၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သောလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲ, လှည့်ကွက်များနှင့်အနီး-Miss ရှင်းပြသည်။ ဒါဟာအသင်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်လေယာဉ်မှူးများ၏ daredevil ချဉ်းကပ်တင်ဆက်ပေးတယ်။ အလယ်အပိုင်းစံချိန်ချိုးလူအစုအဝေး wooed သောနည်းစနစ်များဟာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအပေါ်စစ်ပြန် congratulates ။ အဘို့သင့်အဖြေကိုရှေးခယျြမှု "ဘာဤကျမ်းပိုဒ်၏အဓိက idea က?" အကယ်. အဆိုပါအပြာရောင်ကောင်းကင်တမန်၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းထို့နောက်သင့်ရွေးချယ်မှုများလွန်းကျယ်ပြန့်သည်, သူတို့ဘွဲ့နာမရရှိခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုအတူပြီးပြည့်စုံသော, ဖျောပွ: ကကျမ်းပိုဒ်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သွားနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆွေးနွေးကြသည်မဟုတ်ပေးသည်။
က "အရမ်း Broad" အမှားရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို: ကျမ်းပိုဒ်အပြင်ဘက် step မသင့်သောအဖြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ စမ်းသပ်အပေါ်ကိုသင်အချက်အလက်များများသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိပညာဘဏ်သို့ငုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။ သင်ဤလေယာဉ်အမှုထမ်းတွေနဲ့စွဲလမ်းခံရဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ထိုအေးမြရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်တစ်ယောက်တည်းကျမ်းပိုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးစာမေးပွဲပေါ်တိုင်းမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်စိတ်ကူးကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ်ကျမ်းပိုဒ်သူ့ဟာသူအတွက်အချက်အလက်ကနေစိတ်ကူးအခြမနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သူကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ပင်မ Idea အမှား # 3: Complex ရဲ့တစ်ဦးဖြေရွေးချယ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်အတိုက်အခံ
Getty Images | Marcus Masiking / EyeEm
သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲတွင်အပေါ်ကိုဖတ်ရှုတတိယပိုဒ်အဆိုပါ haiku အဆိုပါ tanka ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကဗြာဆနျပုံစံကြောင်းစောဒကတက်သည်။ စာရေးသူတစ်ဦးချင်းစီသည်ရှေးခေတ်တရုတ်ကဗြာဆနျပုံစံကရှင်းပြသည်နှင့် haiku nobler သောကျန်ရှိတော့သည်ထားပါတယ်နေစဉ် tanka တစ်ကျြမှောကျခတျေချဉ်းကပ်သို့ fit မှရာစုနှစ်များစွာလျှောက်လုံးပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ လိုင်းများ, syllables နှင့်ပုံစံလိုအပ်၏အရှည်ကိုရှင်းပြနေစဉ်, ရေးသားသူအတွက် haiku အဆိုပါ tanka ကျော်သည်မည်မျှသာလွန်သရုပ်ပြတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ကဗျာပေးသည်။
အဆိုပါ tanka အဆိုပါ haiku ထက်ပိုကောင်းကြောင်းအဖြေတစ်ခုရွေးချယ်မှုကို select ဖို့မသတိထားပါ! တစ်ခါတစ်ရံစမ်းသပ်စာရေးဆရာများကျမ်းပိုဒ်မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုင်းများနှင့်တူ၏အရှည်၏အမှန်တကယ်ကောင်းသောအသံပေမယ့်တကယ်ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ကြောင်းအဖြေတစ်ခုရွေးချယ်မှုစေမည်။ စာရေးဆရာများကိုမကြာခဏသင့်ရဲ့စာဖတ်စစ်ဆေးထားတဲ့အဖြေကိုရှေးခယျြမှုသို့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ကိုချော်။
သည် "Complex, ဒါပေမယ့်အတိုက်အခံ" အမှားရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို: ဂရုတစိုက်ဖြေရွေးချယ်မှုဖတ်ပါ။ ဒါဟာမျှသာပိုင်ခွင့် "အသံ" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြေကိုရွေးချယ်မထားပါနဲ့။ သငျသညျပိုကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားအတွက်အဖြေရွေးချယ်မှုထားပါ။ သင်ကတကယ်အဓိကစိတ်ကူးထင်ဟပ်ကြောင်းရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘဲယင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရွေးချယ်ရမယ်!
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံး SAT / ACT အွန်လိုင်းကျုရှင်န်ဆောင်မှုများ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
သင်ထောက်ကူ 1: စာရေးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်
2 မှ4နေ့ရက်များအတွက်စာမေးပွဲအဘို့အလေ့လာမှု
စိန့် Norbert ကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေး
ဘယ်လိုကွန်ဂရက်အလုပ်လုပ်အပေါ် Senior စနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ခရစ်ယာန်များအတွက် 10 ကျောင်းဆင်းပွဲသမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
သံနှုတ် - ခေါက်ရန်, ကွေးပါ
လီနာ horn ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တစ်ခုကလွယ်ကူအဘိဓါန်ပွငျသစျအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပုံပြင်: Montreal အလည်ခရီး
Beginners များအတွက်ကို C programming language
Si အပိုဒ် Threads - တတိယအခြေအနေအရ: Pluperfect + အတိတ်အခြေအနေများ
သီးသန့်လုံခြုံရေးအပေါ်တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ: Griswold v Connecticut ။
ပညာရှင် Hans Moleman ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးခဏ
အီတလီနိုင်ငံရှိ "ပီဇာအယ်လ် taglio" ဆိုင်မှာပီဇာမှာလုပ်နည်း